Gaadiidka - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
In ardayda si nabad ah loo geeyo iskuulka iyo guriga
Sannad kasta waxaan basaska siinnaa in ka badan 6,000 oo arday oo ku nool degmadeena - ardayda dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba. Waxaan qaadeynaa shaqadeena ah u qaadista carruurta si nabadgelyo leh iskuulka iyo guriga mar labaad si aad u culus.
Ardayda dugsiga hoose (fasalada K-5) ee ku nool nus mayl ama ka fog dugsiga waxay xaq u leeyihiin adeegga baska, ardayda dugsiga dhexe iyo dugsiga sare (fasallada 6-12) ee ku nool hal mayl ama ka badan dugsiga ayaa waliba u qalma. Eeg Siyaasaddayada Gaadiidka.
Ardayda dhigata fasalada K-8 waxaa si otomaatig ah loo qorsheyn doonaa basaska sanad walba.
Ardayda dugsiga sare ee fasalada 9-12 waxay u baahan yihiin inay iska diiwaangeliyaan gaadiidka sanad walba.
Ardayda iskuulada gaarka loo leeyahay / kuwa gaarka loo leeyahay waa inay waliba iska diiwaangeliyaan gaadiidka sanad walba.
Sugitaanka baska dugsiga?
Ka raadi barnaamijka bilaashka ah ee ' Versatrans MyStop' ee dukaanka barnaamijka . Barnaamijku wuxuu isbarbar dhigayaa xogta GPS-ka si loo siiyo macluumaadka qoysaska si loo siiyo macluumaadka meesha baskoodu ku yaallo iyo waqtiga la filayo joogsigooda.
Qorshee inaad wax ka qabato caqabadaha baska
fur darawal baska / kormeerka jagooyinka
Gawaarida Baska MyStop
Go'aaminta Wadooyinka Basaska
Wadooyinka waxaa loo habeeyay iyadoo la raacayo nabadgelyada, waxtarka, iyo juqraafi ahaan inta ugu macquulsan.
Codso beddelka joogsiga baska
Ma jiri doono joogsi bas oo laga hirgaliyo meel nus mayl u jirta dugsiga loo qoondeeyay.
Ma jiri doono joogsi bas oo la aasaasay oo u baahan arday inuu socdo wax ka badan nus-mayl.
Joojinta basku waxay ku yaalliin isgoysyada.
Wax ka badan ardayda 10-15 looma qoro boosteejada baska.
Basaska looma ridi doono cul-de-sacs meelaha basku istaago marka laga reebo in la qaado ardayda waxbarashada gaarka ah.
Joogsiga baska waa la dhimi karaa haddii, 10 maalmood oo isku xigta ka dib, uusan jirin arday ka faa'iideystay joogsiga
Ardaydu waa inay yimaadaan goobta basku istaago shan daqiiqo ka hor baska inuu yimaado si loo yareeyo suurtagalnimada maqnaanshaha baska.
Ogeysiis kasta oo ku saabsan isbeddelada waqtiyada baska ilmahaaga wuxuu ka imaan doonaa darawalkaaga qaab ogeysiis qoran ama emayl ama wicitaan taleefan oo ka socda waaxda gaadiidka.
Ma lagu qoray dugsi kale?
Haddii aad dooratay isqorista kale ee dugsi kale oo degmada ah, ama haddii aad ka furatay degmo kale, waxaa suuragal ah inaad bas u raacdo dugsiga.
Haddii aad diyaar u tahay inaad baska kula kulanto goob joogsi ahaan u jirta oo loogu talagalay iskoolka kale OO ay boos uga bannaan yihiin ardaygaaga baskaas, ardaygaaga ayaa loo oggolaan karaa inuu raaco.
Haddii ardaygaaga loo qaadayo ama laga keenayo xannaano-maalmeedka meesha diiwaangelinta ee adeegga baska laga bixiyo, ardaygaaga waxaa loo qorsheyn karaa bas.
Codsiga duwanaanshaha diiwaangelinta beddelka ah
Codsiga basaska ee degmada ka baxsan
Waaxda Waxbarashada MN Su'aalaha Inta Badan La Weydiiyo
Sugitaanka baska dugsiga? Qoysasku waxay kala soo bixi karaan barnaamij mobiil ah si ay ula socdaan baskooda. Kaliya raadso barnaamijka bilaashka ah ee ' Versatrans MyStop' ee dukaanka barnaamijka . Barnaamijku wuxuu isbarbar dhigayaa xogta GPS-ka si loo siiyo macluumaadka qoysaska si loo siiyo macluumaadka meesha baskoodu ku yaallo iyo waqtiga la filayo joogsigooda.
Si loo hubiyo nabadgelyada iyo amniga ardaydeena, haddii ay dhacdo shil gaari ama shil wadayaasha baska iskuulku looma oggola inay sii daayaan ardayda iyadoon laga helin oggolaansho degmo. Waxaan la xiriiri doonnaa qoysaska, sidii aan horeyba u lahaan jirnay, haddii ay dhacdo dib u dhac weyn oo xagga gaadiidka ah. Fadlan ha u adeegsan barnaamijka si aad isugu daydo inaad uga dhex gasho ardaygaaga (ardayda) jidka.
Waa maxay Versatrans My Stop ™?
Versatrans My Stop ™ waa barnaamij moobil bilaash ah oo siiya dhammaan qoysaska ay soo raraan Dugsiyada Dadweynaha ee Stillwater aag ay ka helaan macluumaadka goobta basku hadda joogo.
Sidee Versatrans My Stop ™ u shaqaysaa?
My Stop App waa xog ururin. Waxay si otomaatig ah ugala soo baxeysaa xogta bixiyaha GPS ee shirkadda baska waxayna isbarbar dhigeysaa macluumaadka marinka iyo qorsheynta softiweer ee aan u adeegsanno inaan ku siino ETA qoysaska / ardayda. Waxaa jira dhowr nidaamyo iskutallaab ah oo iskudhafan oo ay tahay in la waafajiyo wax kasta oo si sax ah ugu shaqeynaya:
Unugyada GPS-ka laftirkooda, oo ku rakiban saqafka hore ee baska, waa inay si hagaagsan u shaqeynayaan oo aan la dhaawicin ama jabin.
Calaamadaha GPS-ka waxaa lagu diraa nidaamyada taleefanka gacanta (Verizon). Waxaa jira aagag yar oo ka mid ah degmadeena meesha adeega unuggu aan lagu kalsoonaan karin.
Macluumaadka ayaa markaa loo diraa bixiyaha GPS (Synovia) kaas oo ka soo ururiya xogta dhammaan basaska ku jira diyaaradeena kuna soo daabaca API-ga (Barnaamijka Barnaamijyada Codsiga).
My Stop ayaa xogta ka soo saara API-ga.
Waxaan u xilsaaraynaa macluumaadka GPS-ka basaska u dhigma kaas oo marinaya marinkeena / qorshaynta barnaamijkeena (Versatrans) ee adeegeena. Ururkan marmarka qaarkood waa la carqaladeyn karaa markii garaashka basku ku beddelato baabuur kale oo marin ah (saliidda isbeddelaya, dayactirka, iwm.) Shaqaalaha garaashka basaska aad bay ugu fiicnaayeen inay na soo ogeysiiyaan marka isku-beddelashada basku ay ku dhacdo waqti ku habboon, sidaa darteed waan u dhaqaaqi karnaa ururada marka loo baahdo.
Sidee lagu kalsoonaan karaa macluumaadka?
Ilaa iyo inta dhammaan qalabka kor ku xusan iyo nidaamyadu ay shaqeynayaan oo ay si habboon isugu dubba ridayaan abku waa aalad dheeri ah oo la xaqiijiyay inay waxtar weyn u leedahay qoysaska. Mararka qaarkood, waxaa jiray carqaladeyn xagga adeegga ah cilad ku saabsan isgaarsiinta xogta awgeed, waxaanan ku dhammeynay inaan wax u qabanno qaabkii hore illaa waaxdeenna IT-ga iyo soo-saaraha ay awood u yeesheen inay nidaamka soo celiyaan oo ay shaqeeyaan.
Immisa jeer ayaa la cusbooneysiiyaa macluumaadka?
Goobta basku si otomaatig ah ayuu u cusbooneysiiyaa 30-kii ilbidhiqsi kasta ETA-na dib ayaa loo xisaabiyaa si loo daajiyo dib-u-dhaca ku yimaadda jidka.
Kawaran haddii aan haysto arday badan oo dhigta iskuullo kala duwan?
In kasta oo Username iyo Password loo sameeyay arday kasta, marka la galo barnaamijka adeegsadayaasha ayaa u kala beddeli kara ardayda isla qoyska ah adiga oo riixaya ama riixaya magaca ardayga ee geeska bidix ee kore ee barnaamijka isla markaana xulanaya ardayga ku habboon ee kale.
Qof kale ma arki karaa macluumaadka baska ardaygeyga?
Kaliya haddii aad la wadaagto magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah ardaygaaga. Macluumaadka soo galitaanka maahan mid gaar ah, macnaheedu waa dad badan ayaa lagu qori karaa isla macluumaadka (sida Hooyo, Aabe, fasalka 10aad, Walaal fasalka 8aad, iwm.) Dhowr aaladood isla waqtigaas. In kasta oo adeegsade kastaa uu arki karo waddada baska loo qoondeeyay ardaygooda, keliya macluumaadka joogsiga ardaygaas ayaa iyaga ka muuqata. Macluumaadka shaqsiyadeed (taleefan, cinwaan, emayl, iwm.) Noocuu doono ha ahaadee lama heli karo.
Sideen ku galaa Versatrans My Stop ™?
Si aad u soo degsato barnaamijka, u tag Apple Store ama Google Play oo ka raadi "Vst My Stop" ee Tyler Technologies. Qoysasku waxay ku heli karaan macluumaadka iyaga oo ka qoraya Aqoonsiga kale ee ardayga ee ka socda Skyward inay yihiin Username-kooda, iyo taariikhda dhalashada 8-lambar (mmddyyyy) oo ah Password-keeda. Aqoonsiga Kale waa isla lambarka loo isticmaalo FeePay marka la iibsanaayo qadooyinka dugsiga. Marka la eego qaar ka mid ah ardayda ka baxsan degmada, Magaca Usernarka wuu ka duwanaan karaa. Fadlan hubi emaylka macluumaadka baskaaga. Taariikhda dhalashada ee 8-lambar ah ayaa bilaa "/" ah waxaana loo qaabeeyey iyadoo hogaamineysa 0s bil iyo hal lambar hal lambar. Tusaalooyinka: 1/1/2000 waxay noqonaysaa 01012000, 7/10/2012 waxay noqon lahayd 07102012, 10/2/2014 waxay noqon lahayd 10022014.
Yaan la xiriiri karaa haddii aan dhibaatooyin ku qabo barnaamijka?
Waxaad ka wici kartaa Waaxda Gaadiidka 651.351.8377.
Dhammaan ardayda raacda bas waxay hoos imanayaan qawaaniinta iyo qawaaniinta ay dejiyeen Gobolka Minnesota iyo Guddiga Dugsiga ee Degmada. Ku xadgudubka sharciyadaas ayaa laga yaabaa inay keento, iyadoo kuxiran hadba soo noqnoqoshada iyo darnaanta, hakinta mudnaanta baska. Baska iskuulka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay fidinta fasalka.
Haddii arday akhlaaqdaro, darawalku wuxuu hayaa fursado dhowr ah. Darawal ayaa laga yaabaa inuu baska jiido, ku siiyo digniin hadal ah, u qoondeeyo fadhiga, qoro warbixin anshaxeed, ama kuwan oo dhan. Ogeysiin kasta oo edbin ah ayaa ka iman doonta dugsigaaga. Darawallada kaliya waxay soo saaraan warbixinno, iyaga mas'uul kama aha go'aaminta natiijooyinka warbixinnadaasi waxay noqon doonaan. Dugsiyadu waxay leeyihiin maamule ama kaaliye maamule foomka anshaxa ardayda iyo edbinta baska.
Kahor intaan loo shaqaaleysiinin darawal baska dugsiga, shaqsi waa inuu gudbaa baaritaanka asalka dambiyada isla markaana diiwaanka wadashadooda laga baarayaa xadgudubyada. Iyada oo qayb ka ah tababarkooda, darawal kasta oo baska dugsiga ah waxaa la siiyaa waxbaridda maamulka ardayda. Darawal kasta wuxuu ogyahay mas'uuliyaddooda koowaad inay tahay badbaadada cunug walba oo saaran baskooda. Markuu ardaygu dhaqan xumo sameeyo, waxay ka jeedin kartaa wadaha inuu baska si nabad ah ugu shaqeeyo.
Gaadiidka ayaa loo qoondeyn doonaa dhammaan ardayda u qalma K-8 ee dhigta Iskuulka Dadweynaha ee Stillwater iyadoo lagu saleynayo cinwaanka gurigaaga ..
Haddii ilmahaagu u baahan yahay gaadiid laga raaco meel aan ahayn cinwaanka gurigaaga (sida xannaanada carruurta), fadlan buuxi foomka codsiga.
Cinwaanka Beddelka ah / Codsiga Xanaano-maalmeedka
Qoysaska aan isticmaali doonin baska waxaa laga codsanayaa inay si rasmi ah u diidaan gaadiidka degmada.
Codsiga Diidmada Gaadiidka
Haddii xaalad qoys isu beddesho wakhti kasta inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka, la xiriir Waaxda Gaadiidka waxaannu ardayda ku soo celin doonnaa waddo u dhexeysa saddex - shan maalmood oo shaqo gudahood.
Ardayda leh baahiyaha gaarka ah, fadlan buuxi Foomka Macluumaadka Gaadiidka Degdegga ah ee Qarsoodiga ah
Haddii aad doorbideyso inaad soo dejiso foomka Gaadiidka Degdegga ah qaab PDF ah, waxaa laga heli karaa halkan
Dugsiga Sare iyo Dugsiyada Aan Dawliga Ahayn / Axdiga
Diiwaangelinta gaadiidka ayaa looga baahan yahay dhammaan ardayda Dugsiga Sare ee Stillwater (SAHS), iyo dhammaan ardayda gaarka loo leeyahay iyo kuwa dugsiyada gaarka loo leeyahay ee fasallada K-12.
Diiwaangelinta Gaadiidka ee SAHS
Diiwaangelinta Dugsiyada Gaarka ah / Axdiga
Ka gaabinta soo gudbinta foomka gaadiidka waxay ka dhigan tahay "ka dhaafitaan iskaa wax u qabso" ah ee gaadiidka ardayda looma sameyn doono bas.
Codsiga Lacag Celinta Gaadiidka Loo Geeyo Dugsiyada Aan Dawliga Ahayn
Waxay ku taal Banaanka Xuduudaha Degmo dugsiyeedka # 834 Deganayaasha Degmo Dugsiyeedka 834, ee doorta inay carruurtooda u diraan dugsiyo gaar loo leeyahay oo ka baxsan xuduudaha degmada dugsiga, waxay heli doonaan lacag-celin loogu talagalay gaadiidka carruurta ee xadka degmada iyadoo la raacayo in shuruudaha soo socdaa yihiin qanacsan: